Dhaawaca Danny Welbeck oo aad looga dayrinayo | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Dhaawaca Danny Welbeck oo aad looga dayrinayo
(09-11-2018) Weeraryahanka Arsenal ee Danny Welbeck ayaa waxa soo gaadhay dhaawac halis ah oo walaac weyn ku abuuray naadigiisa iyo xulka qaranka England oo filayey inuu boos ku yeesho, kaddib markii laga saaray ciyaartii barbar-dhaca ku dhamaatay ee Arsenal iyo Sporting CP, taaas oo Gunners ay ugu gudubtay wareegga 16-ka ee tartanka Europa League.
27 jirkan heerka caalami ee xulka England ayaa garoonka laga dhex-qaaday, waxaana markiiba loola cararay cusbitaalka oo xaaladdiisa lagula tacaalayey xalay, waxaana tababare Unai Emery oo ka hadlay uu tilmaamay in dhakhaatiirtu ay ku hawlan yihiin dhaawaciisa oo ay ka dhur-sugayaan warbixinta ay soo saari doonaan.
Ciyaartooyada Arsenal qaarkood oo uu ugu horreeyo Mesut Ozil ayaa iyaguna si murugo leh uga hadlay, waxaanay u rajeeyeen caafimaad degdeg ah.
“Cusbitaalka ayuu ku jiraa, warkiisana waanu sugaynaa laakiin waxay ila tahay in dhaawaciisu halis yahay.” Sidaas waxa yidhi tababare Unai Emery oo saqdii dhexe ee xalay warbaahinta la hadlay.
“Dhaawacyadu way kala duwan yihiin laakiin kani waa inuu ka jabay kuraanta, waanu la joognaa waqtigann adag, sababtoo ah waa qof wanaagsan oo nagu weyn. Waa dhaawac ku weyn isaga, anaga iyo dhamaan dadka shaqsiyan u jecel” Ayuu tababare Unai Emery mar kale yidhi.
Welbeck oo ayaa daqiiqaddii 25aad si xun dhulka ugu dhacay isagoo kor ugu booday kubbad madax ahayd, waxaana markiiba dhinaca kale u jeedsatay lugta, waxaana lagula soo cararay naqas Oxygen ah oo lagu caawiyey maadaama uu galay xaalad adag iyo waxaana muddo ku hawlanaa xaalkiisa dhakhaatiirtii garoonka joogtay oo tiradoodu ahayd 10, hase yeeshee muddo kaddib waxay ula carareen cusbitaal ku yaalla magaalada London.
Dhinaca kale, laacibka khadka dhexe ee Mesut Ozil ayaa si qiiro leh uga hadlay dhaawaca saaxiibkii, waxaanu u rajeeyey caafimaad degdeg ah.
Farriin qoraal ah oo uu ku baahiyey bartiisa Twitterka ayaa waxa uu ku yidhi: “Allah, maya. Hore usoo laabo Danny”
Ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbar-dhac goolal la’aan ah, waxaana ay Gunners u gudubtay wareegga labaad ee Europa League iyadoo laba ciyaarood u hadhsan yihiin, laakiin waxa damaashaadkooda iyo farxaddooda qariyey dhaawac Welbeck.
Si kastaba ha ahaatee, Welbeck ayaa muddo dheer ka maqnaan doona garoomada, waxaana xaaladdiisa iyo muddada uu maqnaan doono ku dhawaaqi doonta Arsenal.